Fiwu-deraalizimii! Bara fiwaadaalizimii keessa jirra nuti Afrikaan cufti. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFiwu-deraalizimii! Bara fiwaadaalizimii keessa jirra nuti Afrikaan cufti.
Fiwu-deraalizimii: Bara fiwaadaalizimii keessa jirra nuti Afrikaan cufti.
Sirna biyyoonni Awurooppaa jaarraa 5ffaa irraa hanga jaarraa 12ffaatti fayyadamaa turan keessa teenyee waan federaalizimii haasofna. Fiwudaalizimiin sirna waraanaa fi aangootti fayyadamanii qabeenya dhuunfachuu (holding properties) dha. Biyyoonni Afrikaa guutuun kanumatti jiru. Lafa dabalatee waan hundi harka warra qawweetiin aangoorra jiruu keessa jira.
Fiwudaalistii keessaa ba’anii warraaqsa bilisummaa fi shaakala wal qixxummaa eegaluunuu jaarraa tokkoo ol nutti fudhachuu danda’a, haala amma keessa jirruun.
Achiin booda haqa ummataa ummataaf deebisanii, haala qubsumaa fi garagarummaa eenyummaa ummataa irratti qorannoo taasisanii sirna kamiin buluutu nagaa fi tasgabbii dhugaa fiduu danda’a jedhanii wixinee baasuu feesisa.
Fedhii fi dantaan ummataa sirnaan eegameefii, ummanni waan ittiin bulu akka filatu hubannoo uumanii mirga isaa kabachiisuun deemsa karaa dheeraa qaba.
Kanaan ala jireenya Awurooppaanonni waggaa kuma tokko dura jiraatan osoo jiraannuu, waanuma afaan isaanii irraa dhageenyeef ‘federalism’ jechuun kaasetta sagalee itti waraabanii deebisanii irraa dhageeffatan san tahuu dha.
Via: Oda Labsi Fajji
Ethiopia’s Tigray crisis: Restoring Peace, Democratic Reforms and Human rights in Ethiopia